३ महिना अगाडी बिहे गरेकी श्रीमतीसंगै चितामा अस्ताए श्रीमान ! – Enepali News
३ महिना अगाडी बिहे गरेकी श्रीमतीसंगै चितामा अस्ताए श्रीमान !
June 27, 2020 81
एजेन्सी । तीन महिना अघि मात्र विवाह गरेकी श्रीमतीको निधन सहन नसकेर श्रीमानले पनि आफुलाई सकेका छन् । श्रीमतीकै चि’तामा च-ढेर उनले ज्यान दिने कोशिष गरेका थिए । तर मलामीले बचाएपछि उनी कुवामा होलिएर ज्यान दिएका हुन् ।
उनको श्रीमतीले पनि यसरि नै ज्यान दि एकी थिइन् । तीन महिना अघि मात्र विवाह भएकी श्रीमती गर्भवती थिइन् । यो घटना भारतको महाराष्ट्रको चन्द्रपुरमा भएको हो । श्रीमानको नाम किशार हो उनी २५ वर्षका थिए भने उनकी श्रीमती २० वर्षीया रुचिता हुन् ।
रुचिताले शौच गर्ने वहानामा घरवाहिर निस्केर कुवामा हो’लिएकी थिइन् । शौच गर्न गएकी रुचिता धेरैवेर सम्म पनि घर नफर्कीएपछि परिवारका सदस्य खोज्न जाँदा उनलाई कुवामा मृ त फेला पारेका थिए । उनी चार दिन अघि मात्र माइतवाट फर्केकी थिइन् । विवाह भएको केही समय पछि नै गर्भवती अवस्थामा उनले यस्तो निर्णय किन गरिन् भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
३ महिना अगाडी बिवाह हुँदाको तस्विर
गत २२ तारिखका रुचिताको अ’न्तिम संस्कार गर्ने क्रममा नजिकै बसेर टोलाइरहेका उनका श्रीमान किशोर चिता ज’ल्दै गरेको अनवस्थामा अचानक दौ’डिएर चिता मा थि च’ढे । मलामी गएका आफन्त र परिवारका सदस्यले उनलाई चि’तावाट बाहिर नि’काले । तर उनी मलामीवाट छु’टेर दौ’डिएर गएर नजिकैको कुवामा गए । उनको पनि तत्काल निधन भयो । घटनास्थलमा देखिएका तस्विर हेर्नुहोस :
श्रीमतीले पनि यहि कुवामा कुदेर ज्यान फालेकी कुवामा श्रीमान पनि कुदेका हुन्
कुवाबाट निकाल्दै शव
बिवाह पछि खुसिका साथ सेल्फी लिदै श्रीमान श्रीमती
प्रहरीमा उनीहरुको आनुसंधन भैरहेको छ
यो पनि : लकडाउनमा तरकारी लिन निस्किए युवक, विवाह गरेर दुलहीसहित फर्किए घर
लकडाउनका बेला एक व्यक्ति तरकारी र खाद्यवस्तु लिन घरबाट बाहिर निस्किएका थिए । उनी घर फर्किंदा आफूसँगै दुलही पनि ल्याए । यो अचम्मको विवाह भारतको उत्तर प्रदेशको गाजियाबाद जिल्लाको हो ।
लकडाउनमा अचानक दुलही घरमा भित्रिँदा युवककी आमाको होश उड्यो । वास्तवमा, उनका छोराले आफ्नी प्रेमिकालाई श्रीमती बनाएर ल्याएका थिए । रिसाएका युवककी आमाले दुलहीलाई आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न दिइनन् । त्यसपछि यो पूरा घटना पुलिस थाना पुग्यो ।
दुलहीको पहिरन लगाएक युवती र उनीसँग एक युवा थानामा उपस्थित थिए । त्यहाँ युवककी आमा आइन् र लकडाउन उल्लंघन गर्ने छोरालाई घरभित्र प्रवेश हुन नदिने बताइन् । भारतीय मिडिया आजतकका अनुसार थानामा युवतीकी आमाले चिच्याउँदै भनिन्, ‘छोरा खाद्य सामग्री लिन गएको थियो र केटी विवाह गरेर ल्यायो । यी दुईले विवाह गरेको कुनै प्रमाण छैन ।’
युवकलाई प्रहरीले सोध्दा आफूहरुले मन्दिरमा विवाह गरेको बताए । युवककी आमा राजी नभएपछि पुलिसले दुलहा–दुलहीलाई छुट्टै भाडामा बस्न सल्लाह दिए ।
Prevईरानले बनायो नयाँ हतियार, अमेरिकालाई टेन्सन!
Nextकार दु’र्घटनामा परि न्युज २४ का पत्रकार कृष्णबाबु पाण्डेको मृ’त्यु
घरमा पूजा लगाएर नुहाउन गएका चट्याङ लागेर ३ जनाको निधन , २ जना गम्भीर घाइते
खुशीको खबर, आज नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
सर्लाहीका १४ वर्षीय बालकलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो
बिहानै ५८ जनामा कोरोना पुष्टि, गण्डकीमा संक्रमितको संख्या ४३८ पुग्यो